Izinga le-Candy Crush 677 ukukopela namathiphu - Candy Crush Game - Izeluleko Zokuphila Zamahhala Ziphanga Amacebo
Ulapha: Ikhaya / Uncategorized / Izinga le-Candy Crush 677 ukukopela namathiphu
Last updated on July 12, 2021 Ngu Isobella Franks Leave a Comment
Uhlu lwezidingo lukaMaslow luchaza ngokucace kakhulu amazinga ahlukene ezidingo umuntu anazo. Ichaza nendlela abantu abadinga ngayo lezi zidingo ukuba zigcwaliseke. Lezi zidingo zingokwenyama, ezokuphepha, social, ego, kanye nokuzethemba. I-Candy crush iwumdlalo okusiza ukuthi ufeze izidingo zakho zokuxhumana nabantu ngendlela ethuthuke kakhulu eyaziwa ngamadoda anamuhla. I-Candy Crush ikusiza ukuthi uxhumane nokuncintisana nabantu emhlabeni jikelele. Abantu bathola ukuma kwabo kwamazwe ngamazwe emdlalweni. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuveza ukuncintisana ngaphakathi kuwe futhi kusiza ukukhula njengomuntu. Bafunda futhi bazijwayeze izici lapha ezingasetshenziswa ekuphileni okungokoqobo.
Abasebenzisi bathola umuzwa wokuba ngabangane, ngokuma kwamazwe ngamazwe kanye nemisebenzi ehlukene ikwenza ufune ukuqhubeka uzama, kaninginingi, ukwakha umoya womkhumbi wabadlali bezemidlalo ngaphakathi kwakho futhi kukunikeza umuzwa wokufeza okuthile. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukuthatha kukho kokubili impumelelo nokwehluleka komdlalo, kodwa ukunikeza umfutho omncane ngomqondo wokufeza silapha ukuze sikunikeze Izinga le-Candy Crush 677 ukukopela namathiphu.
Leli zinga lihlose ukuzuza ama-oda we 10 amaswidi anemithende nezinhlanganisela ezihlutshiwe amaswidi. Akukhona konke lokhu ngenkathi wenza lokhu kufanele uthole amaphuzu okungenani 20,000 amaphuzu futhi lokhu akusona isiphetho, konke lokhu kumele kwenziwe ngamafuphi 35 izinyathelo. Uma ukwazi ukufeza inhloso yeleveli ngaphandle kokweqa umkhawulo wakho wokunyakaza, uzobe uphumelele ezingeni. Kubonakala kulula, akunjalo? Kahle, umdlali ojwayelekile uyazi ukuthi lokhu kuzodinga amahora wokuhlela nokuzama, kanye nokwehluleka okuningi, you will win by chance. Noma kunjalo, sikusize ngokuwina kwakho esikunikeza ngakho Izinga le-Candy Crush 677 ukukopela namathiphu ukuze uqhekeze leli zinga futhi uqhubeke nohambo lwakho ezweni le-Candy Crush Saga!
Candy Crush Level 677 Ukukopela namathiphu
Ngezansi kubaluliwe Candy Crush Level 677 Ukukopela namathiphu ukwenza uhambo lwakho lwe-Candy Crush Saga lube lula futhi lube mnandi:
Isithiyo esikhulu saleli zinga ama-Loco rise Xs njengoba kuyiwo avimba amaswidi akho ahlutshiwe. Kunconywa ukuthi ungachithi isikhathi sakho, noma unyakaza, kuma-meringues ambalwa. Kufanele ususe i-Licorice kwesokunxele nakwesokudla bese uqala ukuqoqa lawo maswidi anemigqa futhi ufeze umgomo wakho.
Obsession with anything is bad. Especially, kubi uma sikhuluma ngamabhomu esikhathi aqhubeka nokuvela emdlalweni. Ungakhathazeki ngazo. Empeleni, kuyingxenye yesithiyo. Just go with it, kunalokho zisebenzise ngokuhlakanipha. Ngaphezu kwalokho, uwafake kuma-combos ahlukene, bese ukhipha amaswidi amaningi angabalulekile ngangokunokwenzeka.
Sebenzisa amakhono akho okuphatha nokuhlela, hlukanisa ukuhamba kwakho nesikhathi. Ngokwesilinganiso, kufanele uthole uswidi onemigqa kuyo yonke inkathi yesithathu, manje lokhu kufanele kube inhloso yakho encane. Ukukhulisa amathuba akho wokuwina: zama ukususa amabhlogo amaningi esifundeni esiphansi sebhodi. Hence this would start a chain reaction resulting in a higher probability of getting combinations of striped candies.